Wararka ka imaanaya degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka degmaasi uu gabi ahaanba mamnuucay inay degmadaas iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ka shaqeeyaan gawaarida ay ku xidhan yihiin muraayadaha madow ee Beensalka loo yaqaano Kadib amar ka soo baxay maamulka degmada.
Madaxa arimaha bulshada ee degmada Balanbale ayaa sheegay in amarkaan uu yahay mid la doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqan galo cidii aan u hogaamsamina laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan.
Masuulkaan ayaa tilaamay inay talaabadaan qayb ka tahay qorsheyaasha lagu sugayo amaanka degmada sidoo kale aad loo baarayo gawaarida magaalada ka baxa iyo kuwa soo galaya si loo hubiyaha waxyaabaha ay gaadiidkaasi sidaan.
← Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Ra’isulwasaaraha Ethopia.
Caasimadda Liibiya ee Tripoli oo looga dhawaaqay xaalad degdeg ah →